Friday 22 September - 7:21 pm NST
राष्ट्रिय बाली विकास अभियान सन्चालन गर्ने सरकारको तयारी, पशुपन्छी मन्त्रालयद्धारा ४० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजानिक
काठमण्डौं, १३ माघ । सन्चु ब्लोन । सरकारले खाद्य संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय अभियान संचलान गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुको समेत समन्वयमा विशेष खाद्यान्न उत्पादनलाई जोड...
मंगलबारबाट उपभोक्ताले पूरा सिलिण्डर ग्यास पाउने !
काठमाडौं १० माघ । पर्सी मंगलबारबाट पुरै सिलिन्डर ग्यास वितरण हुने भएको छ । पछिल्लो दुई सातामा ४० प्रतिशत ग्यास आयात बढेकोले उपभोक्तालाई पूरा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्न लागिएको नेपाल ग्यास उद्योग महासं...
भोलिदेखि मोटरसाइकललाई पेट्रोल दिने
काठमण्डौं, ५ माघ । नेपाल आयल निगमले भोलीदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मोटरसाइकललाई पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । मौज्दात बढेपछि निगमले भोलीदेखि मोटरसाइकलको दर्ता लट अनुसार पेट्रोल वितरण गर्न लागेको हो । निग...
नेपाल एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको सन्चालक समितीमा छानियो
काठमण्डौं, २ माघ । नेपाल एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको सन्चालक समितीको सदस्य बनेको छ । चीनको बेइजिङमा भईरहेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको सम्मेलनबाट नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा छानिएको ह...
जल विधुत लगानी तथा विकास कम्पनीको साधारण सेयर बाँडफाड
काठमाडौं, २९ पुस । जलविधुत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल)ले साधारण सेयर बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीको सेयरका लागि न्युनतम ५० कित्तादेखि ८० कित्तासम्म आवेदन दिनेले जनही १० कित्ता पाएका छन् ...
उच्चमाविलाई सामाजिक संजाल फेसबुकबाट २१ लाख सहयोग
काठमाडौं, २९ पुस । उदयपुरको पहाडी गाबिस ताम्लीछा स्थित महेन्द्र दिप उमाबिमा फेसबुकको संजाल मार्फत २१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि आर्थिक संकलन भएकोे छ । प्राचार्य ढक बहादुर राई र स्थानीय वीर बहादुर राईले फे...
चिलिमेका कर्मचारी आन्दोलित
काठमण्डौं, २८ पुस । लगानी अनुपातमा सेयर पाउनुपर्ने भन्दै चिलिमे जलविद्युत कम्पनिका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । कर्मचारी संघठनमा आवद्ध कर्मचारीहरु चिलिमेको केन्द्रिय कार्यलय धुम्ब...
नाकाबन्दीले ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रभाव : लगानी बोर्ड
काठमाडौं २४ पुस । लगानी बोर्डले भारतीय नाकाबन्दीका कारण ठूला विद्युत आयोजनाको काममा समेत प्रभाव परेको जनाएको छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र ७ सय ५० मोगावाटको पश्चिम ...
रक्सौलबाट ८५ बुलेट ग्यांस रि रुटिङ गरी सुनौलीबाट ल्याईने
काठमाण्डौं, पुस २२ । नेपाल आयल निगमले लामो समयदेखि रक्सौल नाकामा रोकिएका ८५ वटा ग्यास बुलेट रि रुटिङ गरी सुनौलीबाट ल्याउने भएको छ । रक्सौलमा रोकिएका २ सय ५० भन्दा बढि बुलेट मध्ये ८५ वटा बुलेटलाई भारतल...
रामशरण महत उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री घोषित
काठमाण्डौं, पुस २० । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत विश्वकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री घोषित हुनुभएको छ । लण्डनमा रहेको द फाईनान्सियल टाईमको सहप्रकाशन द बैंकरले महतलाई एशिया प्यासिफिक फाईनान्स मिनीस्टर अफ ...